November 4, 2020 - SANTHITSA
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မာနနှင့် မွေးလာဒါကြောင့် မာနလေး ထားကြည့်ပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မာနနှင့် မွေးလာဒါကြောင့် မာနလေး ထားကြည့်ပါ သူမခေါ်ရင် ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေနိုင်တဲ့ မာနလေး ထားကြည့် ပါလို့ ကျွန်မ ပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးတွေးကြတာက ဝေးသွားမှာပေါ့ တဲ့ ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ခံစားနေရတာလေ ။ ဝေးသွားမှာစိုးလို့ မချစ်တော့မှာ ဆိုးလို့ ပစ်သြားမွာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ သောကတွေနဲ့ မာနေတြ ဘယ်လောက် ခဝါချခဲ့ပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါ ။] နောက်ဆုံး ကိုယ်ပဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းကျန် ခဲ့တာပဲ ရှိတယ် တကယ် မချစ်ခဲ့တဲ့သူ အတွက်တော့ လမ်းခွဲဖို့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံရှိနေနိုင် တာပဲလေ ။ အတွေးတွေ အများကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသတ်ပစ် …
ချစ်တို့ရေ ဘဝအတွက် လို့တွေးမိတဲ့သူပေါ်လာရင်တော့ ဒီမေးခွန်း၅ ခုမေးကြည့်ပါဦးနော်
ချစ်တို့ရေ ဘဝအတွက် လို့တွေးမိတဲ့သူပေါ်လာရင်တော့ ဒီမေးခွန်း၅ ခုမေးကြည့်ပါဦးနော် သမီးရည်းစား ထားတဲ့ အခါ ဘဝအတွက် ရည်ရွယ်ချက် ပြီးတော့ပဲ ရည်းစားဖြစ်တာချည်းပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် လည်းတစ်ခါတလေ ရည်းစား အဆင့်နဲ့ ဘဝဟာ အဆုံးသတ်လိုက် ပြီး ဘဝလက်တွဲမယ့် ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို မရောက်တာတွေ ရှိတယ့်နော် အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရင်ထဲ စိတ်ထဲမှာ တကယ့်ကိူ လက်တွဲချင်စိတ် လက်ထပ်ချင်စိတ် ဖြစ်မိတဲ့သူလည်းရှိမှာပါ အဲဒီလို စိတ်ခံစားချငက်တွေ ရှိနေတဲ့ သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ မေးကြည့်ရမှာတွေရှိပါတယ့် ကိုယ့်ကိုယ့်ကို မေးရမှာတွေ့ရှိသလို သူကိုလည်းမေးပါ။ သူနဲ့ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာ မှာသေချာလား ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အတူနေရင်တော့ စိတ်ချမ်သာမှာပေါ့လို့ ပြောမှာသေချာ ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူ …
သူငယ်ချင်းအတွဲတွေကြား Single ဖြစ်နေလား?
သူငယ်ချင်းအတွဲတွေကြား Single ဖြစ်နေလား? သူငယ်ချင်းအတွဲတွေ ကြားမှာ တစ်ယောက်ထဲ Single ဖြစ်နေလို့ ဝမ်းနည်းနေကြတဲ့သူတွေ ရှိလား။ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့နော်။ Single ဆိုတာ ဖြစ်ချင်တိုင်းတောင် ဖြစ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားနော်။ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ Single ဖြစ်နေလဲ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်န်ိုင်မယ့် နည်းလေးတွေ ပြောပြမယ်နော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီး လိုက်ပါ။ တစ်ယောက်ထဲ ဆံပင်ရူပ် ပွနဲ့နေမယ်၊ မုန့်တွေစားမယ်၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်၊ ကမယ် ခုန်မယ်။ အဲတာတွေက တစ်ယောက်ထဲ စိတ်ထင်သလို လုပ်ရတာ ပိုကောင်းတယ်နော်။ ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေကို ကိုယ်ပျော်ရွင်စေမယ့် အရာတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းလိုက်ပါနော်။ ဒိတ်ချင်သလို ဒိတ်လို့ရတယ်နော်။ မယုံမရှိနဲ့။ တကယ်ပါ။ …
အရှယျရောကျလာတဲ့ လူငယျတဈယောကျအတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြတဈခြို့
အရှယျရောကျလာတဲ့ လူငယျတဈယောကျအတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြတဈခြို့ ကြှနျတျော တို့ဟာ အသကျအရှယျ အလိုကျ ဘဝက ပေးတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို သငျယူနကွေရတာ ဖွဈပါတယျ ။ အရှယျ တဈခုရောကျ လာခြိနျမှာ အဖိုးတနျတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို ကွညေကျအောငျ တတျမွောကျ သှားသူတှပေဲ… ပိုမို အောငျမွငျ ပြျောရှငျတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျမှာ အရှယျရောကျလာတဲ့ လူငယျတဈယောကျ အတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြတဈခြို့ကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ ။ ကိုယျထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ အပျေါပဲ အာရုံစိုကျပါ ။ ကြှနျတျောတို့ လုပျရမယျ့ အခကျြတှထေဲက အရေးကွီးတာတဈခုက ကိုယျလုပျနိုငျမယျ့ အပိုငျးကိုပဲ အရငျ အာရုံ စိုကျဖို့နဲ့ …
သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မပျက်သင့်တဲ့ အချက် (၈)ချက်
သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မပျက်သင့်တဲ့ အချက် (၈)ချက် သင့်ကိုယ်သင် မြင်တဲ့အမြင်က သူများတွေ သင့်ကိုမြင်တဲ့ အမြင်ထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်မှ အထင်မကြီးရင် သင့်ကိုမည်သူမှ အထင်ကြီးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မြင်တဲ့အမြင်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ကျရှုံးဖူးရုံ၊ မှားဖူးရုံနဲ့တော့ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မပျက်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်း ကျရှုံးဖူးလို့ပါပဲ။ သင်အောင်မြင်ချင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် လိုချင်တာတွေ မရတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မပျက်သင့်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် အောက်ဆုံးထိ ကျသွားရင်တော့ ပြန်ဆွဲတင်ရတာ ခက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ပျက်နေရင် အောက်မှာဖော်ပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ဘာလို့ စိတ်မပျက်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် …